पानीमा डुब्यो धान, किसानको आँखामा आँसु - Janabato
पानीमा डुब्यो धान, किसानको आँखामा आँसु
२०७८ कार्तिक ३ गते बुधबार ०६:४६ मा प्रकाशित
१ महिना, २ हप्ता, ५ घन्टा अगाडि
बुटवल । बेमौसमको वर्षाका कारण भित्र्याउन ठिक्क पारेको धान बालीमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । तीन दिनदेखि निरन्तर पानी पर्दा काटेर खेतमा राखेको धान डुवानमा परेको छ । वर्षासँगै हावा चलेकाले नकाटेको धानलाई पनि क्षति पुर्‍याएको छ ।
यो पनि पढ्नुस्किसानका आँखामा आँशुअविरल वर्षाले काटेको धान भिजाएपछि…जुम्लामा बाढीले मार्सीधानको फाँट बगायो
प्रदेशका सबभन्दा धेरै धान उब्जनी हुने कञ्चनपुर र कैलालीको पकेट क्षत्रमै बाढीले पाकेको धान सखाप बनाएको छ ।
कृषि विकास निर्देशनालय, सुदुरपश्चिमका प्रमुख यज्ञराज जोशीकाअनुसार पाकेको धान काटेर खेतको गरामा सुकाएका, कुन्यू लगाएको फाँटहरुमा डुवानमा परेका छन् । किसानका घर वरपर नै डुवान भएकाले धान खेतको पानी तर्काउने वा धानलाई व्यवस्थित गर्ने काम गर्नै सकेका छैनन् ।
दशैंको बिदामा किसानले काटेको धान भित्र्याउन पाएका थिएनन् । प्रदेशभरी ६० प्रतिशत जति धान काटेर भित्र्याएका छन् । १५/२० प्रतिशत जति काट्नै बाँकी छ भने काटेर सुकाएको २५ प्रतिशत धानमा क्षति भएको अनुमान छ । दशैंअघि काटेर सुकाएको र कुन्यू बनाएको कन्चनपुर र कैलालीको धानको यो बेमौसमको झरीले बर्बाद बनाएको छ ।
अहिले पनि निरन्तर पानी परिरहेको छ । कृषकले मानो उब्जार ममुरी फलाउन लगाएको परिश्रम खेरा जाने जोखिम छ । धान बालीको क्षति अनुगमन गर्न स्थलगत रुपमा हाम्रो टोली अहिले कैलालीको जोशीपुर नगरपालिका छौं । कतिपय ठाउँमा बाटो अवरुद्ध भएको छ ।
हामी स्रोत साधनले भ्याएसम्म उपाय गरेर फिल्डमा हिँडेका छौं, सबै जिल्लाबाट विवरण मागेका छौं । सुदूरपश्चिमको कुल धान उत्पादनको ७० देखि ७५ प्रतिशत धान फल्ने कञ्चनपुर र कैलाली बेस्सरी प्रभावित छ । एकाध दिनमा घाम लाग्यो र सुकाउन पाइयो भने केही मात्रामा धान प्रयोगका लागि योग्य हुन्नसक्छ । निरन्तर वर्षा भइरहे सबै धान खेतमै उमि्रने अवस्था आउँछ ।
कर्णालीमा ढुवानसँगै हुरीको चपेटा
कणर्ाली प्रदेशमा पनि निरन्तरको वर्षाका कारण धान बालीमा निकै ठूलो असर पुगेको छ । प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयका अनुसार सुर्खेत, जुम्ला, दैलेख र सल्यान जिल्लाका किसान मारमा परेका छन् ।
प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार प्रदेशभर रोपाइँको झण्डै २० प्रतिशत अर्थात् ७ हजार ६७७ हेक्टर क्षेत्रफलमा किसानले लगाएको धान हुरी र डवानमा परेको निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक चित्रबहादुर रोकायले बताए । ‘तीन दिनदेखि पानी लगातार परिरहेको छ । प्रदेशको कुल रोपाइँको २० प्रतिशतले धान किसानले खेतमा काटेर सुकाएको र त्यो धान डुबानमा परेको छ,’ रोकायले भने ।
पानीको निकास नभएकाले काटोको धान सुरक्षित गर्न नसकिएको र नकाटेको धान पनि हावाले ढालेको उनले बताए । झरी एक दुई दिन थपियो भने धान सबै कुहिने अवस्था आउने भन्दै उनले अनलाइनखबरसँग भने, पानी रहेपछि क्षतिको वास्तविक विवरण प्राप्त हुन्छ ।’
लुम्बिनीमा १ लाख ३० हजार हेक्टरमा क्षति
लुम्बिनी प्रदेशमा पनि भित्र्याउन ठिक्क पारिएको धान बालीमा पानी र हावाले क्षति पुर्‍याएको छ । मंगलबार मध्यान्हसम्म प्रदेशभर १ लाख ३० हजार ५६ हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको धानमा बाढी र हावा लागेको प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयले जनाएको छ ।
प्रदेशभर कुल ३ लाख १७ हजार ४१४ हेक्टरमा धान लगाएकोमा ५५ हजार ५४ हेक्टरको धान काटेर भित्र्याईको निर्देशनालय प्रमुख यम नारायाण देवकोटाले बताए । यस्तै ३६ हजार ४८० हेक्टरमा लगाईएको काटेर खेतमा रहेको र ९३ हजार ५७६ हेक्टरमा लगाइएको धान हावा हुरी र भारी वर्षाले ढलाएको उनले बताए ।
‘लगातार परेको पानीले काटेर खेतमा राखेको र ढलेको धानमा ठूलो क्षति पुगेको छ, पानी सुक्यो भने ढलेको धानमा असर कम पर्न सक्छ । तर अझै ठूलो पानी पर्ने आंकलन भएका कारण थप क्षतिको सम्भावना देखिन्छ,’ प्रमुख देवकोटाले भने ।
गण्डकी र प्रदेश २ मा आंशिक असर
वर्षा निरन्तर भएपनि गण्डकी र प्रदेश दुईको धान बालीमा भने असर कम परेको पाइएको छ । गण्डकी कृषि विकास निर्देशनालयका निमित्त प्रमुख बासुदेव रेग्मीकाअनुसार प्रदेशमा धेरै धान उत्पादन हुने नवलपुर, कास्की र स्याङ्जामा धानहरु भिजेको छन्, तर डुबेको छैन । डुबान नहुने क्षेत्र भएका कारण चामलको गुणस्तर घट्ने र पराल बिगि्रने जस्ता समस्या देखिने भए पनि ठूलो क्षति तत्काल नदेखिएको रेग्मीले बताए । पहाडी क्षेत्रमा लगाइएको धानमा फुल खेल्ने र पसाउने बेला भएका छ । हावा र पानीले त्यसमा पनि असर परेको उनले बताए । प्रदेश अन्र्तगतको सबै जिल्लाबाट क्षतिको विवरण माग गरिएको भन्दै रेग्मीले तत्कालका लागि क्षति न्युन मात्रै भन्न सकिने बताए ।
धानको भण्डारण मानिने प्रदेश दुईमा भने मंगलबार मध्यन्हपछि वर्षा सुरु भएको छ । प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालय प्रमुख रतन कुमार झाका अनुसार हालसम्म धान डुवानमा परेको छैन । तर केही मात्रामा धानहरु ढलेको र खेतमा रहेको धान भिजेको सूचना आएको छ । ‘पाकेको धान पानी र हावाले ढलेको छ, उनले भने । कात्तिकमा काट्न लगाइएको अगौटे धानलाई भने असर गर्ने अनुमान रहेको उनले बताए ।
धनुषाको कमला नगरपालिका वडा नम्बर ४ का मालबर मण्डलले १५ कठ्ठा जग्गामा धानबाली लगाएका थिए । पाकिसकेको धानबालीलाई घर भित्र्याउन बाँकी थियो । काटेर खेतमा राखेको धान बेमौसममा परेको पानीले डुबाएको छ । ‘शुरुदेखि खेती गरेरै परिवार पाल्दै आएको छु, अब कसरी छाँक टार्ने ?’ गहभरी आँसु पार्दै उनले भने ।
क्षति विवरण खोज्दै बागमती र प्रदेश एक
भारी वर्षा र हुरीका कारण धान बालीमा पुगेको यकिन विवरण आइनसकेको बागमती र प्रदेश एक कृषि विकास निर्देशनालयले जनाएका छन् । पानीले धान बालीमा परेको असर पहिल्याउन ‘र्‍यापिड टास्कफोर्स’ गठन गरेको कृषि विकास निर्देशनालय, बागमतीका प्रमुख रबिन्द्रबहादुर प्रधानले बताए । नजिकैको स्थानीय तह वा ज्ञान केन्द्रमा आफ्नो क्षतिको विवरण पठाउन किसानलाई आग्रह गरिएको प्रधानले बताए ।
चितवन, काभ्रे, धादिङ लगायतका ठाउँहरुमा धान बालीलाई हावा र पानीले ढालेको विवरण अपुष्ट रुपमा प्राप्त भएको उनको भनाइ छ । प्रदेशभर ठूलो डुबानको अवस्था नहुने भएकाले पानी पर्न कम भए खासै ठूलो असर देखिने अवस्था नरहेको उनले बताए ।
प्रदेश एक भने धान बालीमा ठूलो असर परेको, तर क्षतिको विवरण प्राप्त नभएको कृषि विकास निर्देशनालयले जनाएको छ । ३१ गतेदेखि निरन्तर वर्षा भएकाले झापामा ठूलो क्षति पुगेको खबर आएको, तर ज्ञान केन्द्रहरुबाट विवरण आइनसकेको प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयका प्रमुख प्रकाशकुमार डाँगीले जानकारी दिए ।
गुवा धान बाली भित्र्याउने चटारोमा रहेका किसानहरु झरीको मारमा परेको हुनसक्ने आंकलनसहित कृषि ज्ञान केन्द्रहरुलाई फिल्डमा पुगेर सूचना लिन लगाइएको डाँगीले बताए ।
आर्थिक बृद्धिमै धक्का पुग्नसक्छ : विज्ञ
भित्र्याउने बेला भएको धान पानी र हुरीको चपेटामा परेपछि आगामी वर्ष उन्नत बिउ उत्पादनमा संकट आउन सक्ने आंकलन विज्ञहरुको छ ।
वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ डा. महादेवप्रसाद पौडेलका अनुसार सामान्य पानीले धान डुब्यो भने चामलको स्वाद हराउने र चामल पहेँलो हुन्छ । ‘एक दुई दिन मात्रै डुबे चामल प्रयोगका लागि ठीकै हुन्छ, तर ५/६ दिन भिज्यो भने धान कुहिन्छ र उमि्रन थाल्छ,’ पौडेलले भने ।
पाकेपछि पानीमा भिजेको धानको बिउ उन्नत नहुने उनले बताए । ‘देशैभरको धान बिगि्रने भो, कतै यस्तै धानबाट बिउ बनाइउयो भने अर्को वर्ष झन दानै नलाग्ने हुनसक्छ,’ पौडेलले भने ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का धानबाली विज्ञ डा. सुशील सुवेदी धान भित्र्याउने बेला देखिएको पानीको असर मुलुकको आर्थिक वृद्धिमै पर्ने बताउँछन् । गत वर्षको आँकडाअनुसार कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २५.८३ छ, जसमा माछा र वनजंगलको भन्दापनि धानको योगदान धेरै छ । डाक्टर सुवेदीका अनुसार पानीका कारण पाकेको बालीमा परेको डुबान यस कारण पनि मुलुकका लागि खतरा छ ।
‘नकाटेको धानमा त धेरै क्षति नपर्ला, तर काटेर सुकाएको धान बगाउनु र डुबाउनु ठूलो समस्या हो । यसले धान उत्पादन घट्छ, र समग्र अर्थतन्त्रमा असर पार्छ’ सुवेदीले भने ।
वर्षातका कारण पूर्वभन्दा पश्चि मनेपाल धेरै प्रभावित भएको र फूल फुल्न थालेको धान उच्च जोखिममा रहेको उनले बताए । बिउ काट्ने बेलामा धान पानीमा भिजेपछि धान परिपक्क हुनै नपाउने र अब बनाउने बिउको उमि्रने शक्ति पनि घटने उनको आँकलन छ ।
कृषि अनुसन्धान परिषद् नार्कले अब केही दिन पानी परिरहने भएकाले सकेसम्म सग्लो रहेको धान नकाट्न किसानलाई अनुरोध गरेको छ । ‘सकेसम्म धान नकाट्ने, काट्नबाट रोक्ने नसक्ने अवस्था आए सुकाउने प्रबन्ध गर्न अनुरोध गर्दछु,’ नार्कका सूचना अधिकारी डा. बालकृष्ण जोशीले भने । भिजेको धान पनि पंखा र कुनै माध्यमबाट सुकाउन सकिन्छ भने त्यसो गर्न पनि उनले किसानहरुलाई सुझाव दिएका छन् ।
श्रवण देवको सहयोगमा
झरीको बिपत्ति :एकैदिन १५ जनाको मृत्यु, ४ परिवार सम्पर्कविहिन
सरकार र नेकपाबीच ३ बुँदे सहमति कार्यान्वयनबारे छलफल
प्रधानमन्त्री देउवा र एमसीसीका डेपुटी सिइओबीच भेट
नेकपा (एमाले) विभाजनतर्फ उन्मुख